တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ နာမည်ကျော် ဆုတစ်ဆုကို နိုင်ငံ တကာက အနုပညာရှင် တွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး – Askstyle
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ နာမည်ကျော် ဆုတစ်ဆုကို နိုင်ငံ တကာက အနုပညာရှင် တွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး
ေဖြးေဖြးကေတာ့ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ထိပ္တန္းမင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ မတူညီတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေကာင္းေတြကို ႐ိုက္ကူးေနရသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဖြးေဖြးက အခုႏွစ္ (၂၀၂၀)မွာလည္း နာမည္ႀကီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြ ႐ိုက္ကူးဖို႔ရွိေပမယ့္ ကပ္ေရာဂါအေျခအေနေတြေၾကာင့္ သူမရဲ႕ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြအားလုံးကို ရပ္နားထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္ဒမီဆုႀကီး သုံးဆုကိုလည္း ထိုက္ထိုက္တန္တန္ဆြတ္ခူးရရွိထားၿပီျဖစ္တဲ့ ေဖြးေဖြးက ဒီကေန႔မွာလည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ Asia Special Award 2020 ဆုကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အခုလိုပဲ ေျပာလာပါတယ္။
ေဖြးေဖြးက “Thank You untact 2020 Asia Model Awards in Seoul ! Thank You For choosing me ! Covid 19 ကာလ ျဖစ္လို႔ Seoul ကို မသြားရေတာ့ပဲ Asia Special Award ဆုကေတာ့ Korea ကလွမ္းပို႔လိုက္လို႔ ေဖြးလက္ထဲေရာက္ေနပါၿပီရွင့္။
ေနာက္ေန႔မွ ေက်းဇူးတင္စကားကို စာရွည္ရွည္ေရးၿပီး အမွတ္တရပုံ႐ိုက္ၿပီးတင္ေတာ့မယ္ရွင့္။ Heeeee so happyyyy ေဖြးကို ဒီ Career တေလွ်ာက္လုံးခ်စ္ေပး အားေပးခဲ့ၾကတဲ့ ဆရာ,မိဘ,ေဖြးကို ခ်စ္ေပးသူ Darlings, Oopsies တဦးတေယာက္ခ်င္းစီ တိုင္း အတြက္ ယူတဲ့ ဆုေလးပါရွင္…
I hope you are proud of me … It’s all love… ” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကေနတဆင့္ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းသာစကား ေျပာထားပါတယ္။
ေဖြးေဖြးရဲ႕ ညီမတစ္ဝမ္းကြဲျဖစ္သူ အကယ္ဒမီ ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္ကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္က Asia Special Award 2019 ကို ရရွိခဲ့ၿပီး ေဖြးေဖြးကေတာ့ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္မွာ ထပ္မံဆြတ္ခူးရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေဖြးစိန္ေလးအတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူစကားေတြ ေျပာခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
ဖွေးဖွေးကတော့ နိုင်ငံကျော် ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက် တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် မတူညီတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ရိုက်ကူးနေရသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွေးဖွေးက အခုနှစ် (၂၀၂၀)မှာလည်း နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးဖို့ရှိပေမယ့် ကပ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့် သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကို ရပ်နားထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်ဒမီဆုကြီး သုံးဆုကိုလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆွတ်ခူးရရှိထားပြီဖြစ်တဲ့ ဖွေးဖွေးက ဒီကနေ့မှာလည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ချီးမြှင့်တဲ့ Asia Special Award 2020 ဆုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။
ဖွေးဖွေးက “Thank You untact 2020 Asia Model Awards in Seoul ! Thank You For choosing me ! Covid 19 ကာလ ဖြစ်လို့ Seoul ကို မသွားရတော့ပဲ Asia Special Award ဆုကတော့ Korea ကလှမ်းပို့လိုက်လို့ ဖွေးလက်ထဲရောက်နေပါပြီရှင့်။
နောက်နေ့မှ ကျေးဇူးတင်စကားကို စာရှည်ရှည်ရေးပြီး အမှတ်တရပုံရိုက်ပြီးတင်တော့မယ်ရှင့်။ Heeeee so happyyyy ဖွေးကို ဒီ Career တလျှောက်လုံးချစ်ပေး အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဆရာ,မိဘ,ဖွေးကို ချစ်ပေးသူ Darlings, Oopsies တဦးတယောက်ချင်းစီ တိုင်း အတွက် ယူတဲ့ ဆုလေးပါရှင်…
I hope you are proud of me … It’s all love… ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာစကား ပြောထားပါတယ်။
ဖွေးဖွေးရဲ့ ညီမတစ်ဝမ်းကွဲဖြစ်သူ အကယ်ဒမီ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှစ်က Asia Special Award 2019 ကို ရရှိခဲ့ပြီး ဖွေးဖွေးကတော့ (၂၀၂၀) ခုနှစ်မှာ ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း ဖွေးစိန်လေးအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစကားတွေ ပြောခဲ့ကြပါဦးနော်။